Amahembe → okokuphromotha • Imidwebo efekethisiwe yekhompyutha ye-P & M
Shizi kuyinto izingubo zikanokusho zakudala futhi ezingaphelelwa isikhathi eziyohlala zikhona emfashinini. Ikhwalithi enhle, ephelele ngemininingwane, eyenziwe kahle ngemibala engathathi hlangothi izohlala ingumbukiso ohloniphekile.
Amahembe wokuphromotha - isimilo sakho sobuhle besikhathi
Idizayini yakudala yamahembe iwavumela ukuthi asetshenziswe ezindaweni ezahlukahlukene zokusebenza. Kodwa-ke, uma sifuna ukubanikeza umlingiswa ngamunye, sincoma ukuthi sibamake ngale ndlela ukugqokwa kwamakhompyuthaukusebenza kwawo okuzolingana kahle nesisindo esikhulu samahembe. Sinikeza amahembe wokuphromotha, ayisisekelo esihle kakhulu sokumaka.
Sinikeza amahembe ukukhangisalapho kwenziwa khona noma yimiphi imibhalo. Kuyindlela yokwelapha yangempela ezinkampanini ezazisa inhlanganisela yesitayela esisebenzayo nokusebenza kahle. Sinakekela imininingwane emincane kakhulu, ngakho-ke siyaqiniseka ukuthi sizohlangabezana nokulindelwe ngisho nokufuna kakhulu.
Ku-pm.com.pl awukwazi uku-oda amahembe amahle kuphela, kepha futhi nanoma yikuphi ukufekethiswa kwekhompyutha kumikhiqizo
Ukunikezwa kwethu kufaka phakathi amahembe wokuphromotha kwabesifazane nabesilisa. Amamodeli anemikhono emide izitayela zomhlaba wonke ezingagqokwa unyaka wonke. Kunconywa amahembe anemikhono emifushane ezinyangeni zasehlobo. Izingubo esizinikezayo zijwayela isibalo futhi zikhululekile ukugqoka ngenxa yokusetshenziswa kwezindwangu zikakotini.
Ihembe labesifazane besitayela se-Adler, imibala ehlukahlukene etholakala nokwenzeka kwanoma yikuphi ukufekethiswa
Phrinta ukumelana nokuhuzuka
Amahembe wokuphromotha kuyisiphakamiso esihle sezinkampani, izikhungo noma izikhungo zemfundo ezifuna ukugqama emncintiswaneni futhi zizinikeze ikhadi lokukhangisa elinobuhlakani nenhle.
Imikhiqizo yokuphromotha, noma ngabe ifakwe ilebula yini uhhafu noma izindwangu ezifana amathawulazenziwa ngokunaka imininingwane emincane kakhulu.
Sinepaki lethu lomshini elifakwe i- imishini yesimanje okusenza sikwazi ukumaka unomphela ukumelana nomonakalo. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwentambo esezingeni eliphakeme kugcina ifomu nemibala yokuhlobisa isikhathi eside, ngisho nangemva kokuwasha okuningi. Ukufekethiswa okwenziwe ngale ndlela kungumbukiso ongenakulinganiswa, futhi ukusetshenziswa kaningi kwamahembe akulona usongo.
Sikumema ukuba uvakashele isitolo. Ithimba lethu elinolwazi lizojabula ukukusiza ngokukhethwa kwezingubo futhi lizonikeza ngesilinganiso sokumaka samahhala.